SAWIRRO: Imaaraadka Carabta oo la sheegay inuu geedo NAADIR ah ka bililiqaystay jasiiradda Suqadra (Jidadka Dubai oo lagu arkay!) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka SAWIRRO: Imaaraadka Carabta oo la sheegay inuu geedo NAADIR ah ka bililiqaystay...
SAWIRRO: Imaaraadka Carabta oo la sheegay inuu geedo NAADIR ah ka bililiqaystay jasiiradda Suqadra (Jidadka Dubai oo lagu arkay!)
(Suqadra) 29 Juun 2018 – Imaaraadka Carabta ayaa lagu eedeeyay inuu jasiiradda Suqadra ee hoos tagta dalka Yaman, balse ay Soomaaliya sidoo kale sheegato, ka bililiqaystay geed naadir ah oo la yiraahdo ‘geed dhiig’.
Geedahan oo la sheegay inuu rartay Imaaraadka oo ay halkaa ciidamo ka joogaan, waxayna dadka Yamaniga ihi caroodeen markii sida la sheegaan geedkaa naadirka ah oo aan dunida meel kale uga oollin lagu arkay jid ku yaalla Dubai.
Gayfanayaan Yaminiin ah ayaa UAE ku eedeeyay inay xadeen geedahan oo caadiyan la yiraahdo “Dhiiga labada walaal” kaasoo lagu yaqaanno gasiiradda Suqadra, kaddibna ay ku talaaleen Dubai.
“Britain waxay koonfurta Yemen haysatey 128 sanadood, weligoodna kuma fikirin inay bililiqaystaan geedahan naadirka ah” ayuu yiri gayfane reer Yaman ah oo la yiraahdo Abbas al-Dhali, kaasoo sheegay in falka uu Imaaraatku ku kacay uu eeddeeda leeyahay Sucuudigu.
Sawirkan waxaa ka muuqda wax lagu sheegay geedka oo lagu talllaalayo jid ka mid ah DUBAI.
Previous articleDAAWO: Xulka South Korea oo UKUN & waxyaabo kale lagu tuuryeeyay!
Next articleLA YAAB: Dalalka Sucuudiga, Urdun & xitaa Falastiin oo Yuhuudda u kala dhuuntay! (Yay dacwo ka yihiin?)